5 Best Free Photo Editor for Windows in Edit Photos on PC s
> Resource > Windows > Top 5 Free Photo Editor for Windows - Best Free Photo Editors
Top 5 Free Photo Editor for Windows - Best Free Photo Editors
Haddii aadan ku qanacsanayn aad dhisay-in sawir editor in aad nidaamka Windows, ama aan awoodin in ay iibsadaan ganacsiga software tafatirka sawir, markaas waxaad isku dayi kartaa qaar ka mid ah editor sawir lacag la'aan ah Windows in la abuuro iyo edit sawirada. Free tafatirka software sawir ka mid Halkan xayiraad oo waxaa laga yaabaa in ka xoog badan oo ganacsi software tafatirka sawir. Just download tafatirka ee software free sawir wanaagsan ee Windows iyo retouch sawiro aad dhakhso leh.
Best editor sawir free 1: PhotoScape
Photoscape waa software ah tafatirka xiiso leh iyo sawir sahlan oo awood aad si uu u xaliyo oo kor loogu qaado sawiro si deg deg ah. Si ka duwan tifaftirayaasha sawir guud, waxaa la kala qaybiyey dhowr qaybood: Photo siladda, Photo Editor, Editor Dufcaddii, Page, Isku dar, dhaceen GIF, cayriin Converter, Face Search iyo in ka badan. Hawlaha ugu muhiimsan ee tafatirka sawirka waxaa lagu soo ururiyey in Editor, oo ay ku jiraan resizing, qabsiga midabka, dheelitirka cad, iyo hagaajinta backlight, mab, isagoo intaa ku daray qoraalka, barbaro sawirada, ka saarida isha casaan, iwm Waxaan qabaa inay tahay editor sawirka ugu wanaagsan lacag la'aan ah bilowga ah.
Best sawir free editor 2: Paint.net
Paint.net waxaa horumarinta bilaabay mashruuc kulliyadda shahaadada design sare oo tusaale by Microsoft, asal ahaan loogu tala galay sida kale ah si xor ah u software Rinjiga Microsoft Timid Windows. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ku koray galay software ah tafatirka sawir xoog badan weli fudud. Paint.net qoreysa ah user interface dareen leh oo cusub oo taageero loogu layers, saamaynta gaar ah, oo noocyo kala duwan oo qalab tafatirka sawir waxtar leh oo xoog badan.
Best editor sawir free 3: GIMP
GIMP ayaa muran la'aan waa sawir free software ugu awoodda badan iyo xirfad tafatirka for Windows, caadi ahaan loo arkaa si xor ah u Photoshop. GIMP waa bitmap / pixel ku salaysan barnaamij khalkhalgelinta image u tafatirka sawir iyo retouching, oo bixisa qalab aasaasi ah oo horumarsan tafatirka image ah - rinjiyeeyo, iyo qalabka doorashada, layers iyo taageero channel, waji doorashada, hagaajin midabka, waddooyinkiisa, iwm GIMP uu leeyahay awood leh awooda in ay la tacaalaan layers, filtarrada, iyo qabnay.
Best sawir free editor 4: Photo POS Pro
Photo POS Pro waa editor xor ah oo sawir leh astaamo sare iyo interface user-friendly oo u suurta galinaya in aad si aad maskax ahaan ku shaqeeyo. Waa in uu noqdo Tifaftiraha a photo ganacsi haatan waxa uu noqday meel tafatirka software sawir oo lacag la'aan ah loo isticmaalo. Qalabka Automatic ah ee dayactirka sawir iyo horumarka, qalab loogu talagalay tafatirka iyo beddelo midabo iyo qaabab, filtarrada, iwm waxaa la siiyaa.
Best editor sawir free 5: VCW VicMan ee Photo Editor
VCW VicMan ee Photo Editor bixisaa badan oo qalab rinjiyeynta iyo tafatirka iyo la mid tahay Adobe Photoshop. Qalabka Text, gradients, bedelka midabka, sawir saamaynta gaar ah, iwm ayaa dhammaantood la siiyo soo sawiro aad u heerka ku xiga.
Ka dib markii barashada ku saabsan sida ugu fiican tifaftirayaasha sawir lacag la'aan ah Windows, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah oo aad jeceshahay oo lacag ku tafatir sawir. Haddii aad raadinayso tafatirka software ka hor sawirka, waxaad u tagi kartaa si Photoshop.
Top 5 Best Rotators Video MOV Free
Sida loo sii qulquli Music ka PC in iPad
Sidee ku darto music in windows media player?
7 Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan Windows 10 Office
MPC vs VLC Media Player, taas oo ah mid ka fiican?
Sida loo Download iyo rakib Windows DVD Kan sameeyey on PC (Window 8 Mid)
AVI Editor for Windows 8: Si fudud Edit AVI Faylal ay ku PC
Sida loo isticmaalo Qalabka Digital sawrirrada